Black T-Shaped 55 inch Touch Control Running Board Light Gaming Desk With black ArmorChina Cha Cha desk, gaminggba Cha Cha oche, nọdụ ada oche, pc gaminggba Cha Cha oche emepụta na ụlọ mmepụta ihe-Ahịa List-China Foshan Qiangshou Hardware Manufacturing Co., Ltd.
Z-Shaped Gamig Desk
Z-Shaped 31.5 nke anụ ọhịa na-arụ
Z-Shaped 39 nke anụ ọhịa na Desk
Z-Shaped 47 nke anụ ọhịa na Desk
Z-Shaped 55 nke anụ ọhịa Desk
R-Shaped Gamig Desk
R-Shaped 31.5 nke anụ ọhịa na Desk
R-Shaped 39 nke anụ ọhịa na Desk
R-Shaped 47 nke anụ ọhịa na Desk
R-Shaped 55 nke anụ ọhịa na Desk
T-Shaped Gamig oche
T-Shaped 31.5 nke anụ ọhịa na-arụ
T-Shaped 39 inch anụ ọhịa Desk
T-Shaped 47 nke anụ ọhịa na Desk
T-Shaped 55 nke anụ ọhịa na Desk
X-Shaped Gamig Desk
X-Shaped 31.5 nke anụ ọhịa na Desk
X-Shaped 39 nke anụ ọhịa na Desk
X-Shaped 47 nke anụ ọhịa na Desk
X-Shaped 55 nke anụ ọhịa na Desk
.Lọ > Ngwaahịa > T-Shaped Gamig oche > T-Shaped 55 nke anụ ọhịa na Desk > Black T-Shaped 55 inch Touch Control Running Board Light Gaming Desk Na nwa Armor
Red X-Shaped 55 inch Touch Control Running Board Light Gaming Desk Na nwa Armor
Black X-Shaped 47 inch Gaming Desk enweghị Light
Red T-Shaped 55 inch Touch Control Running Board Light Gaming Desk With red Armor
Black T-Shaped 55 inch Remote Control RGB LED Light Gaming Desk With black Armor
Red R-Shaped 55 inch Remote Control RGB LED Light Gaming Desk Na nwa Armor
Black T-Shaped 55 inch Touch Control Running Board Light Gaming Desk Na nwa Armor
Okpokoro egwuregwu a na-abịa na ọtụtụ atụmatụ agbakwunyere iji nyere gị aka inwe ahụmịhe egwuregwu ka mma. Anyị elekwasị anya na tebụl egwuregwu maka ọtụtụ afọ, nhazi ọkachamara na ọrụ nhazi. Anyị nwere ọkachamara mmepe otu iji chepụta ngwaahịa ọhụrụ ma nye ndị ahịa ngwaahịa OEM na ODM.
Banyere ihe a
Ã ã € AK GKAM egwuregwu SURFACEã € ‘
Okpokoro kọmputa egwuregwu na-egwu egwu nwere egwuregwu egwuregwu na-emesapụ aka nke zuru oke maka ndị na-egwu egwuregwu. Tebụl carbonfiber bụ unyi na ọkọ na-eguzogide ọgwụ, ma dịkwa mfe ihicha ọcha. Okpokoro okpokoro a na-eme ka ị nwee ike ịnọdụ ala ma kwado nkwonkwo aka gị na aka gị. Egwuregwu egwu egwuregwu 55â € obosara site na 23.62 dị omimi, njikwa na-akwụ gị ugbu a ka ị nwee ọgụ zuru oke iji bibie asọmpi gị.
· Ã € Mfe T-yiri ụkwụã € ‘
T-ụkwụ affix na square support iberibe, n'okpuru desktọọpụ, iji kwụsie ike na-enweghị etiti support iberibe na-egbochi ụkwụ ụlọ.
· Ã € Black Armor na Dynamic Touch Control RGB ikanam Lightã € ‘
Ihe agha ojii na-egosi ụdị dị iche, Site na otu okpokoro okpokoro, ị bụ onye kachasị mma. ọkụ ngosi. Ikanam RGB ọkụ na-eji njikọ USB dị ka isi iyi ike. Nwee egwuregwu gị karịa mgbe ọ bụla ọzọ!
Ã ã € AKWATKWỌ AKWATKWỌ ND FOR GAMERSã € ‘
Nke a egwuregwu gaminggba Cha Cha abịa na ọtụtụ kwukwara atụmatụ-enyere gị aka a mma experiencegba Cha Cha ahụmahụ. Nke a PC Cha Cha Oche abịa na a adaba cup njide, ekweisi nko, ihe mmezi-nnukwu òké na mpe mpe akwa gị gaminggba Cha Cha keyboard na òké.
Ã ã € ỌM SMATTA SATISFACTIONã € ‘
Anyị chọrọ ijide n'aka na anyị na-emebe ma na-arụpụta tebụl egwuregwu kachasị mma na ahịa. Anyị na-arụpụta ihe niile na ụlọ ọrụ nke anyị. Anyị na-anya isi na anyị otutu aghụghọ, rigorous ule, na anyị ụwa klas n'ichepụta usoro. Anyị jidere ngwaahịa anyị n'ọkwá dị elu ma nwee olile anya na ị nwere ahụmịhe magburu onwe ya site na iji tebụl egwuregwu anyị.
Q1: Olee otu m ga-esi nweta ego?
A: Anyị nwere ndị ọrụ raara onwe ha nye na ndị ọrụ kọntaktị ga-anọ na ọrụ gị 24 awa n'ụbọchị. Can nwere ike kpaliri anyị, jiri WhatsApp, Facebook, ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ iji kpọtụrụ anyị ka anyị nwee ike ịnye gị ọnụahịa.
Q2: Enwere m ike ịzụta samples?
A: Ee, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị iji nweta ihe nlele maka ego.
Q3: Ogologo oge ole ka oge ndu gị maka nnyefe?
A: Ọ dabere na ọnụọgụ iwu. N'ozuzu, usoro mmepụta maka akpa ụkwụ 40 bụ ihe dị ka ụbọchị 15.
Q4: Gini bu usoro ugwo gi?
A: TT, Otu Aka, L / C ma ọ bụ usoro ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ. Biko gosi anyị tupu ịnye iwu.
Q5: Gini ka m kwesiri ime ma oburu na emebi ngwongwo mgbe anata?
A: Ikwesiri ịnye asambodo ndị dị mkpa, anyị ga-ezitere gị otu ngwaahịa ahụ na usoro na-esote.
Q6: Gịnị bụ ọrụ anyị?
Azịza: Anyị nwere ọkachamara mmepe otu iji chepụta ngwaahịa ọhụrụ ma nye ndị ahịa ngwaahịa OEM na ODM. Anyị ga-enye gị nkọwa niile n'oge mmepụta ihe, nwee ezigbo njikwa na ịhazi ọrụ, yana ịnabata ụlọ ọrụ mmepụta ihe iji gaa ma nye nyocha.
Q7: Gini mere ịhọrọ ụlọ ọrụ gị?
A: Anyị bụ ndị na-arụ ọrụ ngwaike ngwaike ihe karịrị afọ iri abụọ. N'ihi na anyị bụ ndị a ọkachamara emeputa nke metal ngwá ụlọ, àgwà na price bụ nnọọ asọmpi.
Q8: Kedu ka ị ga - esi mee ka azụmahịa anyị dị ogologo ma nwee mmekọrịta dị mma?
A: Anyị na-ekwe nkwa ịre ezigbo mma na ịsọ asọmpi iji hụ na ọ baara ndị ahịa anyị uru. A ga-asọpụrụ arịrịọ gị na mkpesa gị ebe a, n'agbanyeghị ebe ị si.
Tags na-ekpo ọkụ: Deskgba Cha Cha, Black T-Shaped 55 inch Touch Control Running Board Light Gaming Desk With ojii Armor
Biko enwerela onwe gị ịnye ajụjụ gị n'ụdị dị n'okpuru. Anyị ga-aza gị n’ime awa iri abụọ na anọ.
Red T-Shaped 55 anụ ọhịa Remote Control RGB LED Light Gaming Desk With black Armor
Red T-Shaped 55 inch Gaming Desk enweghị Light
Black T-Shaped 55 inch Touch Control Running Board Light Gaming Desk Na-acha uhie uhie Armor
Black T-Shaped 55 inch Remote Control RGB LED Light Gaming Desk With red Armor
: Mpaghara Industrial Shangqi, Nanzhuang Town, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province, China
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ price list, biko hapụ gị email ka anyị, anyị ga-kpọtụrụ gị n'ime 24 awa. Deskgba Cha Cha, gaminggba Cha Cha oche, Nọdụ ala Guzo Oche, pc gaminggba Cha Cha Oche nwere kasị ala ahịa ma ezi mma.
Copyright 2020-2021 China Foshan Qiangshou Hardware Manufacturing Co., Ltd.